Waxaa laga heli karaa Cydia Notific8 | Wararka IPhone
Notific8: Xarunta ogeysiinta ee 8da macruufka ee iOS 7 (Cydia)
Mid ka mid ah riwaayadihii waaweynaa ee la soo bandhigay macruufka 8 waa Xarunta Ogeysiinta gabi ahaanba dib loo naqshadeeyay isticmaaleyaasha aaladaha Apple, oo lagu gartaa in laga beddeli karo isticmaalaha marka lagu daro inuu awoodo ku dar taxane ah wijetro alaab ah in barnaamijyada horumarineed ay noo soo bandhigi doonaan. Inta aan sugeyno macruufka 8 in si rasmi ah loo sii daayo ama aan ku tijaabino betas aaladdayada diiwaangashan, waa ay gaartay Cydia Fidinta Ogeysii8, kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala qalabka iOS 7, kaas oo leh Jailbreak sameeyo, leeyihiin muuqaalka muuqaalka ee Xarunta ogeysiiska ee iOS 8 ee iOS 7.
Tixraaca 8 waxaa soo saaray Stricktron mana u shaqeyso si ka duwan nooca ay hadda ku shaqeyso barnaamijka softiweerka ah ee Apple, wuxuu sameeyaa kaliya muuqaalka. Tabkii ogeysiisyada la seegay ayaa laga saaray, dib ugu magacaw 'All' tab 'Ogeysiisyo' si ay uga dhignaato midka soo socda. Sidoo kale tabka 'Edit' ayaa hoos ka muuqda, taas oo ku jirta Xarunta ogeysiiska ee iOS 8 ayaa noo oggolaan doonta inaan ku darno aaladda cusub ee la heli karo, laakiin maadaama aan loogu talagalin macruufka 7, tabta ayaa noo oggolaan doonta tag goobaha ogeysiiska si toos ah.
Marka la soo koobo, shaqadeeda waa yar tahay, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku hayno Xarunta Ogeysiiska tabka 'Ogeysiisyada', 'Maanta' tabka iyo cinwaanada qeyb kasta waxay leeyihiin midab isku mid ah sida sawirka gidaarka. Hadaan rabno muuqaalka cusub taasi waxay keeneysaa muuqaalkan iOS 8, tweak-ga Notific8 wuxuu fuliyaa hadafkiisa, laakiin ha fileynin shaqooyin cusub oo lagu rakibay qalabka. Haa, Ogeysiis8 waa lagala soo bixi karaa bilaash laga bilaabo Cydia, ee Bakhaarka BigBoss.
Sideed u aragtaa Notific8? Miyaad rakibi doontaa tweak-kan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » Notific8: Xarunta ogeysiinta ee 8da macruufka ee iOS 7 (Cydia)
Salaan sxb. Ma la jaan qaadi doontaa macruufka 7.1 ??? Mahadsanid
Sygic Free, sharadka cusub ee bilaashka ah ee loogu talagalay wareejinta GPS-ka khadka (khariidadaha TomTom)